အတ္တာနဉ္စေ ပိယံ ဇညာ ၊ ရက္ခေယျ နံ သုရက္ခိတံ၊ တိဏ္ဏံ အညတရံ ယာမံ၊ ပဋိဇဂ္ဂေယျ ပဏ္ဍိတော-ရယ်လုို့ ကုိုယ့် ကုိုယ်ကုို ချစ်တယ်ဆုိုလျင် ချစ်ရာရောက်အောင် နေဖုို့ မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်။ စွမ်းအားရှိသ လောက် ကောင်းကျိုးများတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူဟာ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ချစ်သူအစစ်ဖြစ်တယ်လုို့ဆုိုလုိုတယ်။ ကောင်းကျိုးများတဲ့အလုပ်ဆုိုတာက ကုသိုလ်ပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာလည်း မကောင်းလုပ် မကောင်းပြော လုပ်တော့ မယ် ပြောတဲ့မယ်အကြံဖြစ်လျင်ဖြင့် ဒီမကောင်းမှုဒဏ်ကုို ခံရမယ့်သူဟာ ကုိုယ်သာဖြစ်တယ်လုို့ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ပြန်လည်သတိရဖုို့လုိုပါတယ်။ ကုသုိုလ်ဆုိုတာ ဘာကုိုပဲ အကြောင်းပြုပြီး လုပ်လုပ်။ လုပ်ဖြစ်လျင် ကောင်းတာ ပါပဲ။ ဒါနဲ့ ပြောင်းပြန်၊ အကုသုိုလ်ကတော့ ဘယ်လုိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ မလုပ်ဖြစ်၊ မလုပ်ဖြစ်။ မလုပ်ဖြစ်လေ ကောင်းလေပါ။ စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာလုို့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ မွေးနေ့ပွဲကုို အမှတ်တရ လုပ်ပါမယ်။ မွေးနေ့ကုို အခြေခံလုို့ ကောင်းမှုကုသုိုလ်တစ်ခုခု ကုိုယ်တုိုင်လုပ်ဖြစ်လျင် ကုိုယ့်အတွက် အမြတ်ဖြစ်စေသလုို ကုိုယ်နဲ့နီးစပ်သူတွေ လုပ် ဖြစ်တယ်ဆုိုလျင်လည်း သူတုို့တွေအတွက် အမြတ်ဖြစ်စေနုိုင်မယ်လုို့လည်း ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကုိုယ့်မွေးနေ့က မြန်မာလုိုဆုို တပုို့တွဲလထဲမှာ။ တပုို့တွဲလဆုိုတာက မီးဖုန်းပွဲတော် ကျင်းပတဲ့လ။ တပုို့တွဲလ အကြောင်းကုို မြန်မာစာဆုိုတော်ကြီး ဦးကြော့ကတော့-ရွှေယုဂံ နန်းညိုမြက၊ စန်းခုိုခ လျှံလူ။ ချမ်းဆုိုမျှ စံမတူ သည်၊ သယမ္ဘူသော်မှ။ မီးမယ်ဖျူး ရွှေလက်ကင်သည်၊ ရေစက်တွင် အေးတဲ့သည်လ-လုို့ ဖွဲ့ဆုိုခဲ့ပါတယ်။ သွေး သားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြတ်ဘုရားသော်မှ ခြေလက်ဖျားတွေ အေးစက်တော်မူတာကြောင့် မီးကင်တော် မူရတယ်လုို့ အစဉ်အလာစကားရှိခဲ့တဲ့ လရာသီပေါ့။
ကုိုယ်ငယ်ငယ်က ရွာဦးကျောင်းမှာ တပုို့တွဲလပြည့် နံနက်စောစော နံ့သာထင်းမီးတွေနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓကုို မီးပူဇော်ခဲ့ရ တာကုို တမ်းတမိတယ်။ အလယ်မှာ ဝါးစိမ်းတစ်လုံးကို အူတုိုင်အနေထောင်ပြီး သနပ်ခါးသားတွေ၊ သီးသားတွေ ကုို အထပ်ထပ်ဘေးမှာရံပြီး မီးပူဇော်ခဲ့ရတာ။ လေလုံတဲ့ဝါးစိမ်းလုံးကုို မီးလောင်တော့ ဖျောင်းကနဲ ဖောင်းကနဲ အသံက မုိုင်ဝက်လောက်ဝေးတဲ့ ရွာထဲကပင်ကြားရတယ်။ ဝါးမီးပေါက်သံကုိုကြားလျင်ဖြင့် အာရုဏ်တက်ဖုို့နီးပြီ ရယ်လုို့သိတဲ့ ရွာသားများက မိသားစုဝုိုင်းဖွဲ့မီးလှုံရင်း ညဦးပုိုင်းက ပျော်ပျော်ပါးပါးထုိုးခဲ့တဲ့ ထမနဲများကုို ကျောင်း သွားပုို့ဖုို့ အချိန်ရောက်ပြီလုို့ နားလည်လုိုက်ကြတယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ ထမနဲအုပ်တွေကုိုယ်စီသယ်လုို့ ကျောင်းကုိုရောက်လာကြတယ်။ တပုိုတွဲလက ဗုဒ္ဓကုိုရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့ မီးဖုန်းပွဲနဲ့အတူ ထမနဲ(ထမင်းနှဲ) ပွဲတော်ကုိုလည်း တပျော်တပါး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပတဲ့လပေါ့။ အချိုးအစားမျှတပြီး စနစ်တကျထုိုးထားတဲ့ ထမနဲဟာ ရာသီစာဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးမျှတကောင်းမွန်စေသလုို ကြာရှည်လည်း ခံပါတယ်။ ညီညွတ်မှုနဲ့အတူ အားမာန်ကုို ကုိုယ်စားပြုလုို့ ထမနဲပွဲဆုိုတာ ပေါင်းစည်းယှဉ်တွဲခြင်းသရုပ်ကုိုလည်း ပေါ်လွင်စေတဲ့ ရုိုးရာပွဲတစ်ပွဲပေါ့။
ကုိုယ့်နုိုင်ငံကုို၊ ကုိုယ့်လူမျိုးကုို၊ ကုိုယ့်ဘာသာသာသနာကုို၊ ကုိုယ့်…..ကုို ချစ်တဲ့သူတစ်ဦးအဖုို့ ကုိုယ့်ရဲ့ အမှတ် တရ န့တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်နုိုင်ငံ၊ကုိုယ့်လူမျိုး၊ ကုိုယ့်ဘာသာသာသနာ၊ကုိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိသူတစ်ဦးဦးကုို သတိရ မိခြင်းဟာ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသာဖြစ်တယ်လုို့လည်း ယုံကြည်မိပါတယ်။ အချိန်ကြာ အနေဝေးသမုို့ သွေးအေးလုို့တော့ မသွားစေချင်ပါဘူး။ ကုိုယ့်…ကုိုချစ်သူတုိုင်း ကုိုယ့်လုိုပဲ ကုိုယ့်...ကုို သတိရဖုို့ တုိုက်တွန်းစကား ဆုိုချင်ပါတယ်။ ။
Resident Sayadaw - Ashin Nanikabhivamsa, Email - (ashinlay@gmail.com) ,Phone - (510 - 574 - 5442)27695 Leidig Ct, Hayward, CA 94544
Domain & Web Support - Kamayut Technical Services . Picture Window template. Powered by Blogger.